Fikradda naqshadaynta jimicsiga ee ugu fiican ee 24 Dumarka - Fikradaha farshaxanka ee Tattoos
Sawirada yaryar waxay noqotey wax qofku u adeegsan karo si uu uga fogaado wadahadalada sare. Haddii aadan ka warqabin, dhar-gooyuhu wuxuu wax ka dhigi karaa jirkaaga. Sawirada yaryar waa qarsoodi waxayna ka fogaan kartaa dadweynaha marka laga reebo inaad rabto inaad muujiso.
Sawirrada yaryar ee macnaha leh
Sawirada yaryar ee macnaha leh waxay kaa caawin kartaa inaad metesho waxyaabo badan oo kugu dhacaya. . Qaar badan oo ka mid ah dadka ku dhejiya waxay aaminsan yihiin in ay saameyn ku yeelato awoodda sarraysa iyo sidoo kale asal ahaan, waxay muujinaysaa taariikhda iyo sayniska. Dadka isticmaala tattoo-ta waxaa laga yaabaa inaanay xiiseynin macnaha kor ku xusan sababtoo ah tattoo dayaxa waxay leedahay macno badan. Boorashka buluuga ah wuxuu u taagan yahay xakamaynta maskax ahaanshaha jirka. Waxay u taagan tahay xigmad, sirdoon iyo aqoon. Noocyada buluugga ah waxay u taagan tahay aragtida qarsoon ee diinta. Tattoo octopus ayaa sidoo kale macnaheedu yahay in ay rajo ka qabaan mustaqbalka. Awoodda qotada dheeraadka ah ee loo yaqaan 'cytopus' si ay u sameeyaan waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin xubnahooda badan ayaa ah waxa dadka ka dhigaya in ay aaminsan yihiin in abuurku yahay mid isku dhafan. Tattoo tufood waxay macnaheedu noqon kartaa fikradda xorriyadda maxaa yeelay waxay la xiriirtaa shimbiraha. Shimbiraha waxaa loo tixgeliyaa xayawaan lacag la'aan ah waana taas sababta ay u duuli karaan hal qayb oo adduunka ah. Hal ama xitaa baalasha kala duwan ayaa ka hadli kara raadinta xorriyadda.
Dhammaan kuwan iyo dhar-gooyooyin badan ayaa loo isticmaali karaa iyaga oo matalaya wax badan oo xitaa haddii ay yihiin #small qayb kasta oo ka mid ah jirka.
1. Fikradda naqshadeynta quruxda badan ee ubaxa ah ee haweenka
Sawirrada yaryar waxaa had iyo jeer jecel inay eegaan mana laga yaabo inay u baahdaan inay daboolaan qeyb weyn oo ka mid ah jirka. Waxaad ka arki kartaa naqshadahani in shaati-yada yaryar ay yihiin wax xitaa qofkii jecel #tattoo ma tixgelin karo inuu helo
2. Fikradaha yar yar ee feerka ah ee loogu talagalay gabdhaha
Fiiri sawiradan yar yar ee tattooist-ka ah oo kaliya oo ay sameyn karaan tattooist xirfad leh. Markaad ka fekereyso helitaanka tattoo yar, waa inaad sidoo kale tixgelisaa qaybta jirka ee meesha lagu dari karo.
3. Qalab yar yar iyo qaabka tattoo taajka ah
Waxaa jira wax aad raadineysid inta aad qaadaneyso tattoos yar yar. Meeleynta tattoo yar-yar ayaa aad u muhiim ah taasna waa sababta aad marwalba u sameyso baaritaankaada kahor intaadan helin.
Ka soo qaadista yar-yar ee maqaarkaaga ayaa lagu sameyn karaa qayb kasta oo jirka ka mid ah sida sawirka aad fiirineyso. Markaad awooddo inaad tashadaan yar yar, dad badan ayaa mar walba soo jiidanaya.
4. Tartanka yaryar caleenta cagaarka ah ee loogu talagalay gabdhaha
Sida tattoos yar yar, haweenku ma joojin karaan inay qaataan. Waxaad arki kartaa in meeleyntu ay ka dhigayso mid waxtar leh. Waxaad tahay naqshadeeyaha sawirkaaga haddii aad waligaa rabto inaad hesho wax sidan oo kale ah.
5. Fikradda sawir-gacmeedyada yar yar
Gabadhu ma arki lahayd tattoo yar yar oo quruxsan oo aan rabin in ay helaan. Faraha ayaa ah meelo qurux badan oo aad ka heli karto tattoo yar.
6. Naqshadeynta jilicsan ee jilicsan ee dumarka dib loo soo celiyo
Mudanayaal ayaa halkan yimaada oo arag sida jacaylka aad noqon kartid markaad hesho tattoo yar yar. Habka loogu talagalay waxaa loogu talagalay in la sahlanaado markaad adigu naftaada si fiican u qaadato oo kuu samayn karta sawiradaada.
7. Cute yar yar fekerka naqshadeynta tattoo quruxda lugta lugta
Cagaha ayaa ka heli kara cabsida aad u maleyneyso inaad ka fekereyso inaad hesho. Dhammaadka maalinta, waxaad tahay mid ka mid ah xulashada nooca # ah ee aad rabto inaad hesho. Kaliya ha ahaato waxa la maqli karo markaad rabto nooca tattoo ah.
8. Fikradda yar yar ee tattoo wadnaha ah ee lugta gabadha
Tartoo yar yar oo jilicsan waa mid aad u fudud ka badan oo laga yaabo inaad ka shakisantahay oo aad u baahan tahay inaad hesho booska ugu fiican ee khadadka saxda ah.
9. Fikradda qurxinta gabbaldayaha yar yar
Fikrado ka mid ah tattoos kale ayaa lagu gaari karaa naqshad yar oo tattoo yar oo aad jeceshahay inaad hesho. Markaad sidan sameyso, dad badan ayaa awood u leh inay arkaan sida hal-abuurka aad tahay.
10. Naqshadaynta yaryar ee habka haweenka
Waxaad sawiradaada ku dhejisan kartaa sawirka yar yar ka hor inta aadan ku siinin maqaarkaaga maqaarkaaga, si kastaba ha ahaatee xusuusnow in naqshada ay tahay waxa ka dhigaya isbedelka.
11. Fikrado yar yar oo tufaax ah oo sawir ah oo loogu talagalay gabdhaha
12. Naqshad qurux badan oo ubax ah oo qurux badan
Beauty ma aha oo kaliya in ay indhaha ku hayaan dabeecada marka ay timaaddo shaati-yar yar oo qurux badan. Tattoo yar ayaa ku siin kara matalaad aad u baahan tahay si aad u hesho dhammaadka maalinta.
13. Fikradda naqshadeynta jirka ee maskaxda ee garabka
Iyada oo jacaylka yar ee tattoo jacaylka, waxaad hubaal tahay in aad ku xidhantahay qofkaas gaarka ah ee noloshaada. Dhammaantiiba waxay ku bilaabmayaan tallaabo, inta kale waxay kugu tahay inaad kor u qaaddo abuuristaada jirkaada.
14. Fikradaha naqshadeynta ubaxa yaryar ee quruxda badan ee gacanta
Qaar ka mid ah dadka ayaa xitaa ka fekeraya helitaanka naqshadeynta tattoo yar ee cajiibka ah. Haddii aad tahay gabadha aan dooneynin inay qaylo dheer ka dhigto tattoo-ga, doorashadu waa haddaad adigu sameysid.
15. Fikradda naqshadeynta dharbaaxada iyo feerka ee fikrada naqshadaynta gabdhaha
Tixgeli suurtagalnimada inaad hesho markaad hesho tattoo yar, saameynta dadka kale laguma xoojin karo. Waxa aad u baahan tahay inaad sameyso waa wax aan caadi ahayn oo ku daa jirkaada.
16. Dheg ka dib fikradda naqshadda buluugga ah ee buluugga ah ee loogu talagalay gabdhaha
Miyaad jeceshahay tattoo yar yar ee tattoo? Meeleynta tattoo waa mid cajiib ah oo kaliya ayaa wakiil ka ah qofka xiran si uu sheekada u sheego.
17. Fikradda naqshadaynta quruxda badan ee quruxda leh ee loogu talagalay gabdhaha u dhow suulka
Waxaa jira marwalba marka gabadhu gasho dukaanka tattoo oo aysan laheyn wax faahfaahin ah oo ay u baahan yihiin. Si kastaba ha noqotee, marka ay fahamsan tahay in ay heli karto tattoo yar oo aan u baahnayn inay noqoto mid adag si ay u horumaraan.
18. Fikradda yar ee tattoo yar ee haweenka gacanta
19. Fikradda yar yar ee tattoo-dhiska ee cagaha
Intaa waxaa dheer, dhar-gooyuhu waxaa loo isticmaali karaa in la garto sida ay u eegi doonto meeshihiisa, iyada oo aan loo baahnayn in lagu qarash gareeyo lacag caddaan ah oo tafaasiil ah oo aan si fiican loo eryi karin.
20. Fikradda naqshadaynta quruxda yaryar ee quruxda leh ee gabdhaha
Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah qorshooyin tattoo oo kala duwan oo laga yaabo in aad dareento inaad waxoogaa hoos u dhacday go'aanka.
21.Small falsafadda naqshadeynta dumarka
22. Sidee fikradaha yar yar ee tattoo mugdiga loogu talagalay gabdhaha
23. Naqshad dhar ah oo loogu talagalay haweenka
24. Tattoo yar yar ee tattoo tignoo farsamada
Joomatari Tattooscalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahTattoo FeatherTattoo infinitytattoo tilmaansawirada malaa'igtajimicsiga bisadahatattoos qoortatattoo ah octopusmuusikada muusikadatattoo indhahawaxaa la dhajiyay tattoostattoos qosol lehtattoos iskutallaabtatattoos saaxiib saxa ahtattoos eaglesawirada gabdhahatattoos taajkiikoi kalluunkatattoos ubaxwaxay jecel yihiin tattoostattoo dheemanTartoo ubax badantattoos qorraxdaTilmaamta jaalaha aharrow Tattoolibto libaaxshimbir shimbirtattoo maroodigasawir gacmeednaqshadeynta mehnditattoo biyo ahlaabto laabtatattoostaraagada kubbaddagadaal u laabolammaanahaTattoos Wadnahatattoos sleeveshaatiinka shiidanfikradaha tattooku dhaji tattoossawirrada raggatattoos gacantatattoos cagtatattoos qabaa'ilkahenna tattoogaraacista gacmahaDhaqdhaqaaqatattoos moon